Filtrer les éléments par date : mercredi, 19 décembre 2018
mercredi, 19 décembre 2018 13:36
Antanimalandy-Mahajanga: Tara ora roa sy sasany ny fanombohan'ny latsa-bato
Tamin'ny 8 ora sy sasany maraina vao nanomboka ny fandatsaham-bato tao amin'ny biraom-pifidianana miisa 4, tao amin'ny CEG Antanimalandy sy biraom-pifidianana iray tao amin'ny EPP Antanimalandy.
Antony dia nifamadika tamina Fokontany hafa ny lisi-pifidianana tamin'ireo birao ireo. Ny fonon'ny boky an'ny Fokontany voalaza etsy ambony ary an'ny birao fandatsaham-bato saingy ny anaran'ny mpifidy tao anatiny tsy izy avokoa.
Efa nivaha ny olana satria naka lisitra reniny tany amin'ny CENI ny tompon'andraikitra.
mercredi, 19 décembre 2018 13:35
Ankazoabo: Mpikambana birao fandatsaham-bato maty voatifitra
Lehilahy roa, iray tampo, zanaka Sefo kartie ao amin'ny Kaominina ambanivohitra Ankazoabo, Faritra Atsimo Andrefana no maty tsy tra-drano vokatry ny tifitra variraraka nahazo azy ireo teny an-dalana hamonjy biraom-pifidianana androany maraina.
mercredi, 19 décembre 2018 11:35
Bileta tokana: Mangataka ny CENI anome an'ireo biraom-pifidianana ny laharana bileta ho amarinina rehefa vita ny fifidianana
Isaky ny bileta dia misy laharana, hita ny numéro amin'ny souche, miafina azo kikisana kosa amin'ny bileta, hiarovana ny tsiambaran-telon'ny fifidianana.
Mangataka ny CENI kosa ampita io laharana io isaky ny biraom-pifidianana rehefa vita ny latsa-bato, ka dia aleo mandany fotoana mikiky ilay bileta isaina, raha tena bileta mitondra ny laharana tokony ho ao amin'io biraom-pifidianana io marina no nalatsaka.
Mety mandany fotoana kely fa aleo hifanatrehina mba tsy hisy hifanome tsiny avy eo. Rahateo misy souche tavela ao amin'ny birao fandatsaham-bato, ka rehefa kikisana izany ireo bileta narotsaky ny mpifidy, rehefa mikatona ny fandatsaham-bato, dia hianjaka eo ireo bileta tsy mitovy laharana amin'ireo souche tavela sy amin'ny numéro alefan'ny CENI.
mercredi, 19 décembre 2018 11:02
Fifidianana: Miparitaka hita ety ivelany ireo bileta tokana
Maro ireo kariné bileta tokana, izay tokony any amin'ny biraom-pandatsaham-bato ihany no ahitana azy, nefa dia miparitaka ety ivelany.
Bileta tena izy ve ireo sa natonta manokana. Mila ny fanamarinan'ny CENI.
mercredi, 19 décembre 2018 11:01
Fifidianana filoham-pirenena: Tontosaina anio manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara
Mpifidy miisa 9.913.599 no andrasana hanefa ny adidy amin'ny tanindrazana anio 19 desambra 2018.
Misokatra amin'ny 6ora maraina ka hatramin'ny 5ora hariva ireo biraom-pifidianana manerana ny Nosy.
mercredi, 19 décembre 2018 10:58
Raran'ilay olomboafidy tsy hiditra ao anaty biraon'ny fandatsaham-bato ireo delegen'i kandida Marc Ravalomanana.
mercredi, 19 décembre 2018 10:04
Andohanimandroseza CEG Ambohipo: Tsy hita ny bileta BV N°14
Omaly harivan'ny talata dia naterin'ny CENI, ary natrehan'ireo filohan'ny biraom-pifidianana 12, izay mandrafitra ny centre de vote Andohanimandroseza eto amin'ny CEG Ambohipo ireo colis 12 misy ny bileta 700 isanisany avy, satria tsy mihoatra ny 700, araky ny lalàna ny isan'ny mpifidy anaty biraom-pifidinana iray.
Tonga ny maraina samy nifanatrika teo indray ireo filohan'ny biraom-pifidianana 12 niaraka tamin'ny gardien mpiambina ny entana, dia 11 sisa ny colis teo, ka ny colis bileta tokana ho an'ny BV N°14 no tsy teo.
Tetsy ankilany koa anefa, dia mbola nisy nizara karam-pifidianana teo antokotanin'ny CEG Ambohipo, nefa raha ny fepetra noraisina, dia omaly no fara-fizarana ireny karatra ireny.